Mgbanwe ihu igwe nwere mmetụta ka ukwuu karịa ka e siri chee na ụmụ anụmanụ | Network Meteorology
Mgbanwe ihu igwe dị ugbu a bụ ihe ịma aka nye ihe niile dị ndụ. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ụdị nke ga-erite uru, ọtụtụ ndị ọzọ ga-apụ apụ, na-ahapụ nnukwu oghere na gburugburu ebe obibi ha bi na ya ugbu a.
Dika akwukwo ohuru nke Mahadum Queensland (Australia) meputara ma biputa na akwukwo sayensi 'Nature Climate Change', mgbanwe ihu igwe nwere mmetụta ka ukwuu karịa ka e cheburu na anụmanụ.
Offọdụ anụmanụ ndị nwere ike ghara ịhụ anwụ wara n'oge obere oge ma ọ bụ ọkara bụ ọhịa na enyí. N'ụzọ na-eju anya, otu n'ime atụmatụ ha si lanarị nke nyeere ha aka ruo taa bụzi isi nsogbu ha. Ihe ọzọkwa bụ na ilekọta otu ụmụaka ma ọ bụ abụọ nwere uru dị na ya, ebe ọ bụ na ọ dịrị ha niile mfe ịbụ okenye.
Otú ọ dị, N'ụwa ebe mgbanwe na-eme ngwa ngwa, naanị ndị nwere nnukwu mkpụrụ ga-enwe ezigbo ohere ịlanarị.
Ndị ọrụ nyocha ahụ, ndị na-ekwu na elele mmetụta ọ nwere na anụmanụ ndị a bụ elelị, ejirila data sitere na nyocha 136 gbasara ụdị anụmanụ dị otu narị na iri abụọ na otu na nnụnụ 120. Nyochaa ọnụọgụ igwe mmadụ, ọnụego mmeputakwa, mpaghara ala na mgbanwe mgbanwe ihu igwe nke ụdị ndị International Union for Conservation of Nature (IUCN) na-eyi egwu. Ha enweela ike ịchọpụta na ụdị ụmụ anụmanụ 873 dị na ndepụta ahụ, 414 nwere nsogbu ịnabata mgbanwe mgbanwe ihu igwe; n'ihe banyere nnụnụ, nkezi bụ 23,4% (ụdị 298).
Mgbanwe ihu igwe, nke ụmụ mmadụ mere ka njọ, nwere ike ibibi ọtụtụ anụmanụ n'ụwa niile. Ọ bụ ezie na a na-atụ anya na ọnọdụ okpomọkụ zuru ụwa ọnụ na-adị n'okpuru 2ºC ma e jiri ya tụnyere Industrial Revolution, maka ndị ọkà mmụta sayensị iji nweta ihe a ga-esi ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Mgbanwe ihu igwe nwere mmetụta ka ukwuu karịa ka e cheburu na anụmanụ
Anyị banyere n'ọgbọ egwuregwu ọhụrụ: Anthropocene